War Saxaafadeed: ‘Kooxaha Carqaladda ku wada shirka Kismaayo’ Guddiga Jaaliyadda Dibbadda ee Jubbaland |
War Saxaafadeed: ‘Kooxaha Carqaladda ku wada shirka Kismaayo’ Guddiga Jaaliyadda Dibbadda ee Jubbaland
War Saxaafadeed: ‘Kooxaha Carqaladda ku wada shirka Kismaayo’ Guddiga Jaaliyadda Dibbadda ee Jubbalan
Seattle: Annagoo ah Guddiga Jaaliyadda Dibadda ee Jubbaland (JDCW), oo xaruntiisu tahay magaalada Seattle, Gobolka Washington, waxan dhaleecaynaynaa dagaalkii xalay iyo maantaa ay ka rideen Magaalada Kismaayo, kooxo argagixiso huwan iyo qaswadayaal, dagaalkaas oo laga soo abaabulay Muqdisho, gaar ahaan Xukuumadda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaanka u hayo iyo Raysalwasaarihiisa Saacid Faarax Shirdoon, ay ku lug lahaayeen.
“Waxannu dhaleecaynaynaa dagaalka qaska iyo carqaladaynta ah ee Kismaayo ka dhacay, dagaalkaas waxannu u aragnaa mid lagu carqaladaynayo habsocodka Shirka Maammul u Samaynta Gobollada Jubbooyinka. Waxan ugu baaqaynaa Dawaladda Dhexe ee Soomaaliya inay ka waantoobaan carqaladaynta shirka ka soconaya Kismaayo, waxan kale oo ku talinaynaa in gacan bira lagu qabto kooxaha xagjirka ah ee loo soo abaabulay inay dagaal ka dhex ridaan beelaha walaalaha ah ee Kismaayo ku shiraya si ay aayahooda uga tashadaan,” Guddoomiye Kuxigeenka Guddiga Jaaliyadda Dibadda ee Jubbaland, Maxamuud Cabdalla ayaa sidaas yiri.
Waxannu ugu baaqaynaa dadyowga Gobollada Jubbooyinka inaan marnaba midnimadooda iyo hiyigooda maammul ay samaystaan inaan marnaba laga daalin. Waa in fiiro dheer loo yeeshaa, daacad darrada Xukuumadda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo ka soo jawaabi weydey dalabkii Guddiga Shirka Qabanqaabisay, ay kaga codasadeen inay ka soo qayb galaan shirka. Waxan ku boorrinaynaa Guddiga Qabanqaabadu inay shirka furaan sida ugu dhakhso badan maaddaaba ergooyinkii gobollada badi ay Kismaayo ku sugan yihiin.
Waxan sidoo kale ugu baaqaynaa Urur Goboleedka IGAD, Dawladda Kenya, Maammulka Soomaalida ee Kilil5, Xafiiska Qarammada Midoobay ee Soomaaliya (UNPOS), iyo wakiillada Beesha Caalamka inay taageeradii maammul dhiska gobollada Jubbooyinka sii wadaan, si looga dabar gooyo Ururka Argagixisada Alshabaab iyo qaswadayaasha ka dab qaata Xukuumadda Damjadiid ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka yahay.
Waxan Urur Goboleedka IGAD ka codsanaynaa inay ergada Gobolka Gedo oo qaarkood ku xanniban yihiin Garoonka Diyaaradaha ee Garbahaarey, loo diro diyaarad soo qaadda, si ay qayb uga noqdaan shirka. Waana inay mawqif adag iska taagaan hanjabaaddii lagula kacay diyaaraddii soo qaadi lahayd, oo loogu hanjabay in waraaqaha laysanka laga kansali doono, hadday ergadaa Kismaayo geeyaan.
Guddiga Jaaliyadda Dibadda ee Jubbaland (JDCW)